:: My Little World ::: Uncle Penyet
Uncle Penyet ကိုရောက်ခဲ့တုန်းကပါ။ ပုံမှန်ဆို Ayam Penyet စားနေကြ။ အဲဒီနေ့ ကတော့ Pomfret Penyetစားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါးက အစာကြေလွယ်တယ်။ ငါးတစ်ကောင်တည်းနဲ့အာသာမပြေဖြစ်မှာစိုးလို့ကြက်တောင်ပံပါ ထပ်မှာဖြစ်တယ်။ ပိုနေရင်သာ မသိသာတာ၊ လိုနေတာ မကောင်းဘူး။ အဲဒီက ငရုတ်သီး စပ်ပြီး စားလို့ ကောင်းတယ်။
တစ်ကောင်တည်း ငါး... (Pomfret Penyet - S$ 4.50)
တောင်ပံတွေသာပါမယ်ဆိုရင်....(Chicken Wing Penyet - S$2.80)
တိုက်ဆိုင်မှု့ တွေ သိပ်များသွားတယ်။
Ayam Penyet with Rice (S$4.00)
Pomfret Penyet with Rice (S$4.50)
Udang Penyet with Rice (S$4.00)
Dory Penyet with Rice (S$3.50)
Chicken Wing Penyet with Rice (S$2.80)
Uncle Penyet @ NUS Science Canteen,
Posted by Nay Nay Naing at 6/09/2011 01:17:00 PM
Those are really yummy.Where the shop is located? and any branches else u know?Thanks.
မြန်မာလိုတော့ ငါးမုတ် လို့ ခေါ်တဲ့ ငါး ထင်တယ်နော်... အဲဒီလိုကြော်တာ မစားဖူးသေးဘူး...
ဘလော့ဂ် နောက်ခံအရောင်ပြောင်းလိုက်တာ အရမ်းဝမ်းသာသွားတယ်... (အသက်တွေက ကြီး ဆိုတော့ မျက်စိတွေက အရင်ကလို မလိမ်မာတော့ဘူး... အဲဒါကြောင့်ပါ...)
Friday, June 10, 2011 9:39:00 AM
Anonymous>> Su ပြောထားသလိုပဲ အဲဒါ
NUS Science Canteen, 21 Lower Kent Ridge Road Singapore, 119077
ကပါ။ အဲဒီဆိုင်က နာမည်ကြီး၊ စားတဲ့သူ အတော်များတယ်။ အဲ့ဒီဆိုင် ဆိုင်ခွဲတော့ ရှိတယ် မတွေ့ ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့လို Ayam Penyet အင်ဒိုနီးရှား အစားအသောက် ရောင်းတဲ့ ဆိုင်တွေတော့ နေရာတော်တော် များများမှာ တွေ့မိတယ်။
မသက်ဝေ>> ကြုံရင်စားကြည့်၊ စားကောင်းတယ်။ ငါးတစ်ကောင်လုံးဆိုတော့ တန်တယ်။ သူ့ ငါးမုတ်က မြန်မာပြည်မှာ စားလေ့ရှိသလို ငါးမုတ်ဖြူ တော့ မဟုတ်ဘူး။ အမဲ။ ငါးမုတ်ဖြူအသားက ပိုနူးညံ့တယ်။
အရောင့်ရင်က စမ်းရင် ပျင်းသွားလို့ ကြာသွားတာ။ အဖြူနောက်ခံက ကြည့်ရတာ ပိုရှင်းတယ်။
Su>> ကျေးဇူး။ အလုပ်က အင်ဒိုတွေညွှန်းလို့နေ့လည်စာ စားချိန် အကူးတက သွားစားတာ။ ကျောင်းသားတွေပဲ မဟုတ်ဘူး။ အပြင်က လာစားတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးတယ်။ လူတန်းက အရှည်ကြီး၊ ဒါပေမယ့် ထည့်ပေးတာ မြန်တယ်။ အကြာကြီးတန်းဖို့ တော့မလိုဘူး။
Saturday, June 11, 2011 5:39:00 AM
Ayan penyet ဆိုင်က လပ်ကီးပလာဇာနဲ့ Jurong point မှာရှိပါတယ်.. တော်တော်နာမည်ကြီးပါတယ်..
အဲဒီက ငါးပိထောင်း အကြိုက်ဆုံးပဲ..း)
♪ စာနာတတ်သူမို့.. မင်းအတွက်အသက်ရှင်